Ogaden News Agency (ONA) – Laba qarax oo xoogan oo ka dhacay magaalada Muqdisho Ee Caasimada Wadanka Soomaaliya.
Laba qarax oo xoogan oo ka dhacay magaalada Muqdisho Ee Caasimada Wadanka Soomaaliya.
Posted by Wariye Qaran	/ March 24, 2017
Laba qarax oo xoogan ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, kuwaasi oo in badan laga maqlay degmooyinka gobolka Banaadir, qaraxa koobaad ayaa ka dhacay xaafadda Seeybiyaano ee degmadda Hodan ee magaaladda Muqdisho lamana oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay.
Qaraxa labada ayaa ka dhacay banaanka hore ee maqaayada Banooda oo u dhaxeysa taalada Xaawo-Taako iyo Daljirka-daahsoon, inta la ogyahay hal qof ayaa ku geeryooday, halka 4 qof oo kale ay ku dhaawacmeen.
Qaraxa ayaa ahaa mid ka dhashay gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa oo goobta la dhigay, gawaadhida dab damiska iyo kuwa gurmadka deg-dega ayaa goobta soo gaaray, qaraxa kadib, sanadkii hore qaraxa gaadhi loo adeegsaday ayaa ka dhacay isla banaanka hore ee maqaayada Banadooda, ma jirto cid sheegatay masuuliyada Qaraxa.
Laba maalin ka hor isla Qarax gaari loo adeegsaday ayaa waxaa uu ka dhacay difaaca ay ciidamadda Ammaanka dowladda ay ku leeyihiin Xarunta Golaha Murtida Iyo Madadaalada National Theater magaaladda Muqdisho, oo aad ugu dhow maqaayada Banadooda, waxaana Qaraxaasi ku geeryooday ugu yaraan daraasiin ruux.